ရထားချွတ် Hop ရောမမြို့ကနေတစ်နာရီကြာမြင့်စွာစီးနင်းပြီးနောက်, သငျတို့သ Bracciano မှာရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီလိမ့်မယ်. ဒါဟာအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ အလယ်ခေတ်မြို့ Bracciano ရေကန်၏ကမ်းခြေပေါ်မှာအများကြီးရှိပါတယ် ကမ်းလှမ်းမှုကိုမှမြင်ကွင်းများ. ဥပမာ, သင်သွားရောက်နိုင်ပါတယ် Orsini Odesalchi Castle, အရာများစွာကိုမှူးမတ်တစ်ဦးနေထိုင်ရာခဲ့သည်.
ပိုပြီးအဘယျသို့, ဒီခံ့ညားအိမ်ကြီးကိုလည်းကေတီဟုမ်းစ်အတွက် Tom Cruise နဲ့လက်ထပ်ရာအရပ်ကြီး 2006. ထို့အပြင်, သငျသညျ Braccianos ဘုရားကျောင်းမှာသွားရောက်နိုင်ပါတယ်, အလယ်ခေတ်ကြိမ်အတွင်းတည်ဆောက်ခဲ့သည့်.
စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာသမိုင်းဆိုင်ရာအရေးပါမှုကိုတစ်မြို့အဖြစ်, နေပယ်လ်ဟာတွေ့ကြုံခံစားရန်ရှာနေမည်သူမဆိုအဘို့သွားရောက်ကြည့်ရှုရပါမည်ဖြစ်ပါသည် အီတလီ နှင့်ရောမမြို့ကနေတစ်နေ့ခရီးများထွက်ယူ. တောင်ပေါ်က Vesuvius ၏အမြင်များ, အံ့သြဖွယ်ဗိသုကာ, နှင့်နွေးထွေးသော, ဖော်ရွေဒေသခံများ တမြို့လုံး၏အဓိက features တချို့ကိုများမှာ. သို့သျောလညျး, နေပယ်လ်ကိုလည်းအဖြစ်ကျော်ကြား ပီဇာ၏မွေးရပ်မြေ Margherita. ပိုကဘာလဲ, Antica ပီဇာဆိုင်ကို PortAlba - သငျသူတို့ကပထမဦးဆုံးပီဇာကိုဖန်ဆင်းရှိရာပီဇာဆိုင်ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်.
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “5 နေ့အီတလီနိုင်ငံ Explore ရန်ရောမမြို့ မှစ. Trips” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးကိုပေးနိုင်ပါသည်ဖြစ်စေ. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/day-trips-rome-explore-italy/- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)